Ukutya kweMeditera yintoni kwaye kuyinzuzo? | Ukutya kukaNutri
Ngokuqinisekileyo uvile izigidi zamaxesha, thetha izondlo kunye noogqirha Kweli lizwe ngezibonelelo ezininzi elinazo Ukutya kweMeditera impilo kunye nomzimba. Ukutya kweMeditera kubuyela emva kwiinkulungwane ezininzi kwaye kunjalo indlela esempilweni kakhulu yokondla ukuba zonke iidolophu zommandla weMeditera ziyalandela.
Maninzi amazwe alandela olu hlobo lokutya: iSpain, i-Itali, iSipro, iGrisi okanye iPortugal. Emva koko ndiza kukuxelela ngakumbi malunga noku kutya kunempilo emzimbeni kwaye awunakuphoswa kwindlela otya ngayo imihla ngemihla.
1 Iimpawu zokutya kweMeditera
2 Izibonelelo zokutya kweMeditera
3 Iingxaki zangoku zokutya kweMeditera
4 Ingozi yokutya kweMeditera iyanyamalala
Iimpawu zokutya kweMeditera
Akukho kutya kweMeditera, kukho iintlobo ezininzi kolu hlobo lokutya kuba amazwe amaninzi alandela olu hlobo lokutya. Nangona kunjalo nangona kukho umahluko kunye nokukhetha okuthile, ukutya kweMeditera kuthotho lwee Iimpawu eziqhelekileyo Kwaye babelana kuwo onke amazwe.
Eyona nto iphambili kukutya kweMeditera yile ioli yeoli.
Ukusetyenziswa okuphakathi ngexesha lesidlo sasemini.
Ukutya ityebile kwifayibha njengoko kunjalo ngeziqhamo, imifuno kunye nembotyi. Iisaladi kufuneka babekhona kuzo zonke izidlo. Kungcono ukutya iziqwenga ezi-3 zeziqhamo ngosuku kwaye uthathe imifuno kabini okanye kathathu ngeveki.
Xa kuziwa ekuphekeni, ukucaciswa kwezitya zilula kwaye zilumke kakhulu.
Kolu hlobo lokutya, kuncinci ukutya okutyayo okuneprotein, njengenyama ebomvu. Ngokuchasene noko, ukuba kukho ubukho obuthile be intlanzi okanye iinkukhu.
Kuqhelekile ukusebenzisa iimveliso ezinje nge itswele negalikhi kwaye uzisebenzise njengesiseko ekulungiseleleni izitya ezahlukeneyo.
Kukho incasa ekhethekileyo Isitrasi kwaye ngenxa yeencasa zeasidi ezinje ngeviniga okanye ilamuni, zombini zisetyenziselwa indawo izitya zonyaka njengeesaladi.
Ukutya kokutya kweMeditera kuhlala kuhamba kunye iglasi yewayini yeRioja.
Xa kulungiswa izitya ezahlukeneyo kunye neeresiphi, zihlala zisetyenziswa zonke iintlobo zeemveliso ezintsha, ezinje nge imifuno, intlanzi okanye iziqhamo.
Ukusetyenziswa kwe irayisi kunye ipasta Kolu hlobo lokutya kuhlala kuphezulu, ngakumbi malunga namaxesha ama-3 okanye ama-4 ngeveki.
Kungenxa yoko le nto endaweni yokuthetha ngokutya kweMeditera ngokukodwa, kufanele ukuba kwenziwe ngokuchanekileyo ngakumbi kunoko ubomi beMeditera, kuba ngaphezulu kwendlela yokutya yindlela yokuphila enothotho lwezithethe ezizodwa ezifana ukubamba emveni kokutya.
Izibonelelo zokutya kweMeditera
Ukutya kweMeditera kubonelela izibonelelo ezininzi zempiloNgaphezulu kwako konke, kuyanceda ukunqanda izifo zentliziyo kunye nokuthintela umngcipheko wokufumana uhlobo oluthile lomhlaza. Ngokumangalisayo, ezi zibonelelo bezisaziwa kangangeminyaka embalwa, ngakumbi bekunjalo Kwii-60s kulandela isifundo esenziwe yiNetherlands.
Olu phononongo luveze umahluko omkhulu okhoyo phakathi kwenani lokufa ngenxa kwizifo ezinxulumene nentliziyo kumazwe afana ne-US namanye amazwe afana ne-Greece. Lo mahluko ubufanelekile kuhlobo lokutya kunye nendlela yobomi eyayikhokelwa luluntu ngalunye. Emva kolu phando, yabonwa izibonelelo ezininzi ukuba umzimba unokutya okusekwe kukutya kweMeditera.
Iingxaki zangoku zokutya kweMeditera
Okwangoku Ukutya kweMeditera ayibalulekanga kwiminyaka embalwa edlulileyo kwaye iye yafuduswa ngolunye uhlobo lokutya kuncinci ukucacisa kwaye usempilweni yomzimba. Ukusebenza ixesha elide kunye nokufakwa kwabafazi kwihlabathi lomsebenzi kukhokelele kukhetho olungcono lohlobo ukutya okukhawulezayo. Ngoku kukusasazwa okukhulu kunye namatyathanga okutya ilawula intengiso Ke kukho iindidi ezininzi zeemveliso onokuzisebenzisa.
Zonke ezi zinto zibangele Ukutya kweMeditera iye yafuduswa yindawo yokutya eyi-Anglo-Saxon etyebileyo Amafutha ezilwanyana kwaye isempilweni kakhulu kwaye iluncedo kumzimba kunokutya kweMeditera.
Ingozi yokutya kweMeditera iyanyamalala
Ngaphandle kokungeniswa kweli lizwe lethu uhlobo lokutya njenge-Anglo-Saxon isekwe kukucaciswa okuncinci kokutya kunye nobukho obukhulu bamafutha ohlobo lwesilwanyana, kancinci kancinci kuya kuqala ukubakho ukwazisa kuninzi loluntu Ukutya okunempilo kakhulu okunamafutha amancinci abonelela ngezibonelelo ezininzi emzimbeni.
Uninzi lweengcali zesondlo kunye neengcali kwilizwe lethu zibonisa ukuba kubaluleke kakhulu ukulandela ukutya okunje ngeMeditera Ukuthintela izifo zentliziyo, zihlala zimanyene kuphuhliso lwemihla ngemihla lomthambo omncinci okanye umthambo. Ngezi zinto zimbini zilula kwaye zilula ukuthobela, iingcali ziyakuqinisekisa oko ubunzima bomntu buya kwanela Kwaye ngekhe kubekhona naluphi na uhlobo lobunzima obugqithisileyo.
Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukukhuthaza phakathi kwabantu abancinci, incasa ye ukutya okuninzi ngakumbi okunje ngeMeditera zenziwe kukutya okunempilo njengeziqhamo kunye nemifuno, ukubanceda baphile ubomi obuphilileyo ngokwenene kude Amafutha amabi kakhulu yomzimba.
Kule minyaka yangoku, amaqela ezopolitiko amelwe kwiNdlu yeeNgwevu abonakalise ukubaluleka kokukhuthaza uhlobo lokutya okunje ngeMeditera kangangoko ngenxa izibonelelo ezingenakubalwa ukuba ibonelela kumzimba. Ngesi sizathu kwaye ngenxa yokunyuka kokuzibandakanya kweenkokheli zaseSpain kunye nemithombo yeendaba eyahlukeneyo, akukho bungozi balo naluphi na uhlobo Ukutya kweMeditera inokunyamalala kukutya kweSpanish.
Emva koko ndiza kukushiya ividiyo apho bachazwa khona izibonelelo ezininzi ukuba ukutya kweMeditera kunegalelo emzimbeni kwaye impilo yakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » Isibonelelo sokutya » Ukutya kweMeditera
Olunye ulwazi olungaqhelekanga malunga nekofu
Yitya oku kutya ebusuku ukuze ulale ngcono